Uwe egbugbu | Igbu egbugbu
Diana Millan kwuru | | Attdị Anụmanụ
Ogba okpu bu umu anumanu ihe omuma nke ihe ojoo ojoo. Ejikọtara ya na ọnwụ, ajọ mmụọ ma ọ bụ mgbaasị, nnụnnụ a enwetabeghị ezigbo aha. Ọbụna ha ararawo ha nye otu okwu sị: bulie nkụkọ ma ha ga - apụ n'anya gị. Mana n'agbanyeghị ihe niile, aha ọjọọ a bụ ihe na-eme ya ụdị enigmatic.
Mana dịka Oscar Wilde kwuru, "hapụ ha ka ha kwuo maka m ọbụlagodi na ọ dị njọ." Nke a bụ ugoloọma, nnụnụ n'agbanyeghị na inwe aha a na-enye ike na enyo n'otu oge.
1 Ugoloọma na ihe nnọchianya ya:
1.1 Anụ Crows na Nduru:
1.2 Ugoro tattoos:
Ugoloọma na ihe nnọchianya ya:
Nnụnụ a na-ejikarị mysticism, akụkọ ifo na ihe omimi. Enwere ike ịchọta ntụnye nke ugolo ọma na akụkọ ifo niile. Ọbụna na Bible. Na akụkọ ifo Norse dịka ọmụmaatụ, anyị hụrụ Hugin na Munin, ugolo abụọ ndị dakwasịrị n'ubu Odin. Na Sweden a na-akpakọrịta crows na mkpụrụ obi ndị egbuworo. Kama nke ahụ, Germany na-ejikọ ha na mkpụrụ obi mara ikpe.
Anụ Crows na Nduru:
O yiri ka nduru ahụ ewerewo akụkụ mara mma. Ọ bụ ịmata ihe, anyị nwere kpalakwukwu bụ kama "ezì" na-ebunye ọtụtụ ọrịa. Ọbụna taa, a maara ha dị ka oke na-efe efe. Ma… ha bụ ezigbo ndị na fim. Ha na-egosipụta ịdị ọcha, eziokwu na ikpe ziri ezi (Ọbụna ma ọ bụrụ na ha na-atụ gị ụjọ, ha dị ọcha ...). Mana ka anyi chekwaa egburu egburu ahu maka ubochi ozo.
Mgbe ahụ anyị nwere akwa akwa. Anumanu a bi n’oké ọhịa, ugwu ndị dị elu ma ọ bụ ọbụna n’ógbè mmiri jupụtara na ya. Ma otu n’ime njirimara na-adọrọ mmasị nke ugolo ọma n’enweghị mgbagha ọ bụla. Ọ bụ otu n'ime nnụnụ nwere nnukwu ụbụrụ, ha maara ihe, kensinammuo ma dịkwa mma. Ihe ndị a bụ àgwà metụtara mmadụ (ma ọ bụ kwesịrị), na-eburu n'uche na ohere nwere ike ịkọwa dị ka nghọta. Dịka ị pụrụ ịhụ, ma ndị ezigbo mmadụ ahụ dị mma, ma ọ bụ ndị ọjọọ ahụ dị njọ.
Egbugbu a nwere ike inwe ọtụtụ ihe ọ bụla na-abụghị nke metụtara akụkọ ifo. Site na mbido, ihe onyogho na-awụ akpata oyi n’ahụ. Nha ya, ya na ọchịchịrị gbara ọchịchịrị, isi ihe nnụnụ a pụtara bụ ịdọ aka na ntị. Ejikọtara ya na ịrara mmadụ nye na imegwara, mana yana nchebe.
N'ebe a, anyị ga-ahapụrụ gị ụfọdụ onyonyo nke tattoos tattoos ka ị nwee ike were ụfọdụ echiche maka egbugbu dị oke mkpa n'anya mbụ.
Pathzọ zuru ezu na edemede: Igbu egbugbu » Ofdị egbugbu » Attdị Anụmanụ » Uwe egbugbu
Samurai tattoos, aghụghọ na ihe ọ pụtara
Chiara Ferragni ọhụrụ egbugbu: ụtụ maka anụ ụlọ ya